XEELAD CUSUB:Alshabaab oo Cashir cusub baray Ciidanka Gaashaan Iyo DFS Oo afka gacanta Saaratay | Xaqiiqonews
XEELAD CUSUB:Alshabaab oo Cashir cusub baray Ciidanka Gaashaan Iyo DFS Oo afka gacanta Saaratay
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxay waddaa qorshe ballaaran oo xabsiga lagu dhigayo saraakiil iyo ciidamo lala xiriirnayo iney wax ka ogaayeen weerarkii Al-shabaab xalay ku qaadeen Pizza House.
Xogta ayaa sheegaysa in saraakiil ay fududeeyeen in qaraxan uu si sahlan usoo galo magaalada Muqdisho, gaar ahaan halka lagu qarxiyey.
Waxay DFS baareysaa meydka dagaalyahannada Al-shabaab iyo sidoo kale dareeskii ciidan ee ay wateen.
Waxaa la raadinayaa raad raac badan, iyadoo la doonayo in markaan lasoo afjaro meel walbo oo uu salka la galo baaritaanka weerarkaasi.
Warar lagu daabacay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa lagu yiri”DFS waxaa ka go’an in ay xididada u siibto cid walbo oo ku lug yeelata qaraxii xalay ka dhacay Muqdisho”.
Hase ahaatee marka la eego qaabka, waqtiga iyo sida heer magaalnimada leh ee weerarka loo soo aagaamisay waxa ay arintani DFS ku noqoneysaa Waji gabax madaamaa maalmihii ugu danbeeyey ay dowladda ku dhawaaqeysay in guud ahaan amninigii muqdisho la xasiliyey.
Dhanka kale Sirdoonka DFS ayaa cashar Cusub ka baran doono tabaha Is badbadalaya Ee xarakada alshabaaab waxaana la sheegay in Ragga ka Tirsan Alshabaab ee gudaha U galay Hotelka ay Wateen labiska ciidanka Dowladda gaar ahaan kuwa loogu yeero xasilnta Casimadda.